Ufuna ukulwela isithunzi umsakazi owabizwa ngenkawu – LIVE Express
Msizi Zondi | 15 February 2016 | General, News |
Umsakazi wesiteshi somphakathi iZwi lo Mzansi 98.0 FM uthi uzimisele ngokulwela isithunzi sakhe kuze kube sekugcineni kulandela ukubizwa ngenkawu ngowomdabu waseNdiya nongomunye wabaphathi benkampani enkulu ethutha izimpahla nezinze e-Phoenix, entshonalanga neTheku.
uSfiso Sibisi, oshayela uhlelo lwezingxoxo i-Sfiso Sibisi Talks phakathi kwehora lesithupha kuya kwelesikhombisa, nophinde abe nguMhleli wezindaba kulo msakazo, kuyimanje ubhekene namacala amabili okungawokulimaza impahla kanye nokulimaza umuntu.
Kulesi sigameko kusolwa lo msakazi ngokuthi wajikijela ngetshe i-truck lenkampani i-Tradeport nezinze khona e-Phoenix waphinde walimaza nomshayeli walo leli-truck ngetshe. Ngokwesitatimende isenzo salo msakazi sokujikijela ngetshe sadala umonakalo ongange-R150 000 kanti umshayeli yena kuthiwa kwaze kwadingeka ukuthi athungwe ngenxa yokujula kwengozi.
Engxoweni ekhethekile ne-LIVE Express lo msakazi ukubeke kwacaca ukuthi ufisa ngayo yonke indlela ukuthi ligcine lithethiwe leli cala, lingachithwa, ukuze kuvele obala lokho akholwa ukuthi kuyitulo akhelwa lona abaphathi benkampani besebenzisa amaphoyisa.
uSibisi uthi ukuvulelwa kwakhe amacala kuyimizamo yokumthusa khona ezoyeka ukulandelela izindaba zabasebenzi ezithinta le nkampani. Engxoxweni eyenziwa ngocingo neyaqoshwa lo msakazi watshelwa ukuthi uzotholelwa icala azovulelwa lona kanti futhi yiyo le ngxoxo athukwa kuyo ebizwa ngenkawu waphinde watshelwa ukuthi akathole omunye umsebenzi ongcono angawenza.
Ngokwalo msakazi uthi usuku okuthiwa wenza ngalo icala, ngenyanga ka-Septhemba 2015. akazange alubhade ngalo kule nkampani. Uthi yena wagcina ukuya khona ngoJulayi 2015.
Mhla ziyi-18 ku-Febhuwari 2016 lo msakazi kulindeleke ukuba avele enkantolo yase Verulam nalapho kulindeleke ukuthi kuqale kudingidwe ukuthi umshushisi bukhona yini ubufakazi obanele anabo ukuze kuqhutshekwe necala.
uSibisi uthi angeke kwamphatha kahle ukuthi leli cala livele lichithwe. “Cha kusobala ukuthi kuyodingeka ukuthi ngibaphonsele inselelo ngoba isithunzi sami sehlisiwe, ngilale esitokisini izinsuku ezimbili, ngivezwe kwabezindaba njengomuntu oyisigebengu, ngithukiwe. Ngibukelwe phansi. Isithunzi sami sehlile ngokomsebenzi nangokwesithunzi nje somuntu. Kumele kube khona izifundo okumele zifundwe abantu abathintekayo ,” kusho uSibisi.
Lo msakazi uqhube wathi ukholwa ukuthi umphumela waleli cala uzokwazi ukuthi uvule abantu amehlo, ufundise abantu, nokuthi ukwazi ukuveza obala lokho akholwa ukuthi ukusebenzisana phakathi kwamaphoyisa kanye nenkampani kanjalo nokucindezelwa, nokuxhashazwa kwabantu abamnyama.
Okunye lo msakazi athi akumphathi kahle ukuthi kwathuleka nya ngale nkathi yena ebizwa ngenkawu ekubeni udaba lwakhe lwenzeka ngaphambi kwalolu olwasusa umsindo kuleli ngenkathi uPenny Sparrow ebiza abantu amamnyama ababehambele ebhishi ngezinkawu enkundleni yezokuxhumana.
Uthi yena ngokombono wakhe abaholi abahlukene ikakhulukazi kwezepolitiki abanalo iqiniso njengoba ethi abanye babo wabathumelela le ngxoxo eqoshiwe. Uthi wathumela abaholi bamaqembu ehlukene kanjalo nobuholi bamaphoyisa KwaZulu Natali kodwa kwaceba iziziba.
uSibisi akaconsi phansi kubalaleli bohlelo lwakhe ikakhulukazi njengoba behlale bebabaza isibindi anaso nokukhuluma angesabi ngalokho abakholwa ukuthi kungamaqiniso ezindabeni ezithinta umphakathi kanye nezepolitiki.